Eden Hazard, Harry Kane, Neymar Jr Iyo Lixda Ciyaartoy Ee Uu Florentino Perez Badal Uga Dhigan Karo Xidiga Dhaawucu Dishooday Ee Gareth Bale. – WWW.Gool24.net
Eden Hazard, Harry Kane, Neymar Jr Iyo Lixda Ciyaartoy Ee Uu Florentino Perez Badal Uga Dhigan Karo Xidiga Dhaawucu Dishooday Ee Gareth Bale.
Kooxda Real Madrid ayaa ka walwalsan dhaawacyada aan dhamaadka lahayn ee uu la kulmo xidiga kooxdeeda ugu qaalisan ee Gareth Bale kaas oo markale muddo bil ah garoomada kaga sii maqnaan doona dhaawac cusub xarunta tababarka kooxdiisa ku soo gaadhay khimiistii la soo dhaafay, waxayna maamulka Florentino Perez ka fikirayaan xidigaha badalka ay uga dhigan karaan haddii ay go’aan ku gaadhaan in Bale ay iska fasaxaan.
Sida uu ku waramay wargeysyada AS ee dalka Spain ka soo baxa, Real Madrid ayaa qorsheyneysa inay iibiso laacibkeeda ree Wales ee Gareth Bale marka uu dhamaado xili ciyaareedkan ee uu furmo suuqa xagaaga soo aadan, sababa la xidhiidha inay ku dhibtootay dhaawacyada badan ee soo gaadha xili kasta.
Gareth Bale ayuu dhaawac kasoo gaadhay kulankii Champions League ee Borussia Dortmund ee horaantii xili ciyaareedkan, waxaana la filayay inuu dib ugu soo laaban doono garoomada kulanka xiisaha badan ee Madrid Derby ee ay wada ciyaari doonaan kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid, laakiin dhaawaca cusub ee soo gaadhay ayaa ka dhigaya inuu mudo kale uu garoomada kasii maqnaan doono.
Wargayska AS oo si aad ah ugu dhaw kooxda Real Madrid ayaa wuxuu sheegay inay jiraan magacyada Lix ciyaaryahan oo ay Los Blancos badalka uga dhigan karto xidiga uu dhaawucu dishooday ee Gareth Bale, kaasoo dhinaca kale la filiyo inuu u dhaqaaqo kooxda Manchester United ama kooxaha kale ee Premier Leaque.
Real Madrid ayaa bartilmaameedka kowaad ka dhiganaysa xidiga xulka qaranka Belgium iyo kooxda Chelsea ee Eden Hazard kaas oo marar badan ku celceliyay sida uu u jecel yahay in uu la shaqeeyo Zinedine Zidane oo uu taageere khaas ah u yahay. Florentino Perez ayaa saxiixa Hazard u dhaqaaqi doona si uu badal ugu noqdo Gareth Bale basle Chelsea ayaan si sahlan ku fasixi karin Hazard.
Harry Kane oo ka tirsan kooxda Tottenham isla markaana ay Real Madrid xiiso badan wayn u hayso ayaa noqon kara badalka xidigii hore ee kooxdiisa Tottenham ee Gareth Bale kaas oo dhibaato badan kala kulmaya waayihiisa Santiago Bernabeu laakiin sidoo kale liiska ay Madrid isha ku hayso waxaa ka mid ah Dele Alli oo laba gool kooxdeeda ka dhaliyay kulankii Tottenham.
Haddii liiska ciyaartoyda ay Real Madrid badalka Gareth Bale ka dhigan kartaa ay laba ka ka mid ahi ka tirsan yihiin kooxda Tottenham waxay sidoo kale maamulka Madrid isha ku hayaan Kylian Mbappé iyo Neymar Jr oo iyaguna ka tirsan kooxda PSG si ay mid ka mid ah uga dhigan karaan badalka Bale haddii ay bartilmaameedyada kale socon waayaan.
Ugu danbyn Robert Levandowski ayaa sidoo kale qayb ka ah liiska ciyaartoyda uu Perez ka dhigan karo badalka xidiga dhaawucu dishooday ee Gareth Bale iyada oo waliba gool dhaliyaha Bayern Munich iyo xulka qaranka Poland ee Robert Levandowski uu markii horeba diirada u saarnaa Los Blancos.